Madaxweyne Xaaf Galmudug waxey dhismeysaa Markey kabaxaan Magaalada dhuusamareeb Nimanka qaska kawada. – Kismaayo24 News Agency
by admin 5th January 2020 0206
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maalmo ka hor ka baxay heshiis uu horey ula galay DF ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya aysan Galmudug ka socon doonin wax uusan isagu rabin, isagoo dhinaca kale eedeymo u jeediyey dowlada.
Waxaa uu intaas ku daray in in labadii sano ee lasoo dhaafay Galmudug lagu hayey dagaal wajiyo badan leh, kaasoo hadafka ugu weyn ee laga lahaa ahaa in madaxda federaalku ay meesha keensadaan dad iyaga ka amar-qaata.
“Markii hore howlaha maamulka waxaan ka wadi waayey dowladda dhexe, balse markii aan tanaasulay waxay dowladdu burburisay wixii aan dhisay labadii sano ee aan meesha maamulayey” ayuu yiri Xaaf.
Ra’isul Wasaare Kheyre ayuu dhinaca kale ku eedeeyey inuu bedelay qaar ka mid ah odayaashii saxda ahaa ee beelaha Galmudug ayna taas sababtay qeylo-dhaan ka soo yeertay beelaha qaarkood.
Waxay mareysaa xaaladu in odayaashii saxiixayaasha ahaa awoodii laga qaaday oo kuwo kale la keeno, caawa iyo berrina waxaa la rabaa in odayaashaas laga saxiixo 69-ka Xildhibaan ee ka dhiman baarlamanka Galmudug” ayuu yiri Xaaf.
Waxaa uu eedeyn shaqsi ah u jeediyey raisul wasaaraha Somalia oo uu sheegay inuu wax walba doonayo inuu maamulo.
“Ra’iisul Wasaarihii dalka oo laga rabay inuu ilaaliyo Cadaaladda, in isagii inta Dhuusamareeb fariisto uu isku noqdo guddigii khilaafaadka, guddigii doorashooyinka iyo isku duba ridaha Galmudug Waa nasiib darro” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Xaaf.
Xaaf ayaa sheegay in xalka Galmudug uu ku jiro inay Dhuusamareeb ka tagaan Ra’isul Wasaare Kheyre iyo Wasiirkiisa arimaha gudaha, haddii taas la waayana ay sii socon doonto dhibaatada ka taagan.
Xaaf ayaa sidoo kale sheegay in muddo xileedkiisa uusan dhamaan dastuurka maamulkana uu dhigayo inuu xafiiska fadhiyo afar sano, taasoo uu xusay ineysan weli dhamaan.
Cumar Filish Duqa Magaalada Muqdisho Oo Guddoomiye Cusub U Magacaabay Degmada Cabdicaiis
Kooxda Al-Shabaab oo lagu jabiyay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidanka xoogga dalka ee.
War Dag Dag Ah: Laba Nin Oo Dil Ugu Xukunaa Falaagada Argagixisada Ah Ee Al Shabaab Oo Ka Baxsaday Xabsi Ku Yaalay Magaalada Buurdhuubo.
admin 15th April 2013 28th August 2015
TOP NEWS: Dhageyso Yuusuf Dabaged oo Fariin Culus u diray Guddiga Doorashada Dadban iyo Habka loo soo…..